မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ငှားရန် Serviced Apartmentများ | ShweProperty.com
ငှားရန် - Reasonable Price Landed House for Rent in Yankin Township
Reasonable Price Landed House for Rent in Yankin Township Price. 1500 USD Area. 2400 sqf Location. Yankin Township21/2 RC,3Master Bed Room , 1 Single Room,5Air Condition, Balcony, Clean Bath Room, Heater -15 Minuets Drive to Myanmar Plaza -10 Minuets Drive to Gamonepwint and Waizayantar City Mart…...
Reasonable Price Landed House for Rent in Yankin Township Price. 1500 USD Area. 2400 sqf Location. Yankin Township21/2 RC,3Master Bed Room , 1 Single Room,5Air Condition, Balcony, Clean Bath Room, Heater -15 Minuets Drive to Myanmar Plaza -10 Minuets Drive to Gamonepwint and Waizayantar City Mart…
ငှားရန် - Lovely Bright Furnished3Bed Rooms Unit for Rent in Yankin Township
Lovely Bright Furnished3Bed Rooms Unit for Rent in Yankin Township Looking for space, comfort andatouch of luxury? This is the perfect apartment for you! It is located in Yankin Township. These condo give you the feeling of being in the quiet and peaceful place, yet you're onlyafew short minutes…...
Lovely Bright Furnished3Bed Rooms Unit for Rent in Yankin Township Looking for space, comfort andatouch of luxury? This is the perfect apartment for you! It is located in Yankin Township. These condo give you the feeling of being in the quiet and peaceful place, yet you're onlyafew short minutes…
Asking Price : 900 USD
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် ဘောက်ထော် ပြည်သာယာရိပ်မွန်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
ရန်ကင်းမြို့နယ် ဘောက်ထော် ပြည်သာယာရိပ်မွန်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ တိုက်ခန်း ငှားမည်။ Size - ( 900 Sqft )4- Floor…...
ရန်ကင်းမြို့နယ် ဘောက်ထော် ပြည်သာယာရိပ်မွန်ရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ တိုက်ခန်း ငှားမည်။ Size - ( 900 Sqft )4- Floor…
ဖုန်းဆက်ရန် 09 77 99 33 549 , 09 42 6767 567
09 77 99 33 549 , 09 42 6767 567
Phone no : 09 77 99 33 549 / 09 42 6767 567
ငှားရန် - ဗိုလ်ချူပ်ဈေးနှင့် Junction city အနီး နိုင်ငံခြားသား အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…
ဗိုလ်ချူပ်ဈေးနှင့် Junction city အနီး နိုင်ငံခြားသား အသင့်နေထိုင်နိုင်သော ဒဂုံမြို့နယ် ယောမင်းကြီးလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…...
ဗိုလ်ချူပ်ဈေးနှင့် Junction city အနီး နိုင်ငံခြားသား အသင့်နေထိုင်နိုင်သော ဒဂုံမြို့နယ် ယောမင်းကြီးလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
ငှားရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် အင်းယားလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
ကမာရွတ်မြို့နယ် အင်းယားလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်း2ထပ်တိုက် ငှားမည် ။ Size - ( 70 - 80 ) 2RC မာစတာအိပ်ခန်း - 4…...
ကမာရွတ်မြို့နယ် အင်းယားလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်း2ထပ်တိုက် ငှားမည် ။ Size - ( 70 - 80 ) 2RC မာစတာအိပ်ခန်း - 4…
ငှားရန် - Twin Centro Condo For Rent (ID-766)
Twin Centro Condo for rent in Sanchaung Township. 1800 sqft condo area, organized by Living-room,2Master Bed-rooms, 1 Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Monthly rent price - 2500 USD (Nego) Twin Centro Condo For Rent (ID-766) We can do negotiate on that Above mentioned price of the…...
Twin Centro Condo for rent in Sanchaung Township. 1800 sqft condo area, organized by Living-room,2Master Bed-rooms, 1 Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Monthly rent price - 2500 USD (Nego) Twin Centro Condo For Rent (ID-766) We can do negotiate on that Above mentioned price of the…
ငှားရန် - CRA-2860, မဟာန၀ရတ်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1440sqft) ရှိ အခန်းကျယ် အမြန်ငှားမည်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟဟာန၀ရတ်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အဝန်း(1440) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊…...
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟဟာန၀ရတ်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အဝန်း(1440) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊…
ငှားရန် - CRA-2859, ကမ္ဘာအေး Luxury Condo တွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ အခန်းကျယ် အမြန်ငှားမည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေး Luxury Condo တွင် အကျယ်အဝန်း(1600) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊…...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေး Luxury Condo တွင် အကျယ်အဝန်း(1600) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊…
ကမ္ဘာအေး Luxury Condo
ငှားရန် - Kyaik Ka San Road (ကျိုက္ကဆံလမ်းမ)
*Location – Kyaikkasan Road, Tamwe Township. *Price – 12 Lakhs *Property Type — Apartment(GF) *Area — 900 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township....
*Location – Kyaikkasan Road, Tamwe Township. *Price – 12 Lakhs *Property Type — Apartment(GF) *Area — 900 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township.
Kyaik Ka San Road (ကျိုက္ကဆံလမ်းမ)
Phone no : 01-209310, 01-209311
ငှားရန် - LayDaungKan Road (လေးထောင့်ကန်လမ်းမ)
*Location – LayDaungKan Road, Tamwe Township. *Price – 7.5 Lakhs *Property Type — Apartment(GF) *Area — 900 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Ceramic, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township....
*Location – LayDaungKan Road, Tamwe Township. *Price – 7.5 Lakhs *Property Type — Apartment(GF) *Area — 900 sqft *Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Ceramic, 1-Bathroom and ready to live located at Tamwe Township.
Asking Price : 7.50 သိန်း
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ တိုက်ခန်းများ မီနီကွန်ဒိုများ ကွန်ဒိုများ လုံးချင်းအိမ် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ခြံ၊ မြေကွက်များ စက်မှုဇုန်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ကယားပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ ချင်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ နေပြည်တော်ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်